Sheekh Aadan Sune Wadaad Ka Haajiray Somaliland Oo Tahriib Ku Galay Alshabaab - #1Araweelo News Network https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
Sheekh Aadan Sune Wadaad Ka Haajiray Somaliland Oo Tahriib Ku Galay Alshabaab
Muqdisho(ANN)-Wadaadka caanka ah ee Aadan Candiraxmaan Warsame oo caan ku noqday magaca Aadan Sune, ayaa co codkiisa la maqlay, kaddib markii dhawr toddobaad oo lays weydiinayay markii lagu warhelay inuu ka maqan yahay gurigiisa xaafadda Masalaha ee Koonfurta Hargeysa.
Haseyeeshee Sheekh Aaadan Cabdiraxmaan Warsame “Sunne” ayaa wareysi siiyay BBC-da, isagoo ku sugan deegaannada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab kaga hadlay sida uu Hargeysa kaga baxay iyo sababta uu go,aankaa u qaatay.
Waxa uu xaqiijiyay in uu kasoo baxsaday Jamhuuriyadd Somaliland, isagoo eedeyn u jeediyay xukuumadda.
“Magaalada Hargeysa waxaan uga soo baxay anniga oo reerkeygii wata in waddankii aan ku dhashay oo aan ka ahaa nin culimo ah oo ku howlan dacwadda Islaamka iyo tarbiyada Islaamka ay igu timi carqalad xooggan oo ku wajahan howshayda, taasoo kaga timi nidaamka ka jira meesha,” ayuu yidhi.
“Hadda waxaan joogaa meel ka mid ah dalkeygii Soomaaliya, gaar ahaanna ku suntan qaybaha wilaayaadka Islaamka ay gacanta ku hayaan. Waxaan dhex mushaaxayaa wilaayaadka 11-ka ah ee ay gacanta ku hayaan xaradaha Shabaab,” ayuu yidhi Sheekh Aadan Sunne.
Wararka qaar ayaa ku macneeyay tegitaankiisa Al shabab inuu yahay sidii hoggaanka ururka u qaban lahaa, balse arrintaa oo BBC weydiisay ayuu jawaab ka bixiyay.
“Arrintaasi waa male’awaal. Anigu cidna lama wadaagin eray noocaas oo kale ah, hadday dadku laabtayda waxa ka guuxaya male’awaalayaanna xaq uma laha, oo laabtayda waxa ku jira Allah oo kenliya ayaa og. Laakiin annigu waxaan kuu sheegayaa wixii mas’uuliyad diimeed ah ee i qabsada ee laasim igu noqda annigoo diyaar u ah oo Allah ugu dhawaanaya haddana ma jecli madaxnimo,” ayuu yidhi.